वित्तीय साक्षरता Archives ~ Page2of 36 ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भइरहेको हुन्छ । आवेदन पनि थुप्रै पर्ने गर्छ । तर, छनौटका क्रममा बैंकहरुले आफूले खोजेजस्तो आवेदक नपाएको गुनासो गर्छन् । यता, आवेदकहरु आफू किनछनौट भइएन भन्नेमा अलमल पर्छन् । कुनै पनि बैंकमा जागीर खानको लागि लिखित परीक्षाको तयारी गर्दा थुप्रै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी बैंकहरुले
वित्तीय योजना : कसरी सुरु गर्ने ? कसरी वनाउने ? (महत्वपूर्ण टिप्सहरु)
बैंकिङ खबर । हामी समृद्ध हुन चाहन्छौं, धनी हुन चाहन्छौं र खुशीको साथ जीवन बिताउन चाहन्छौं । अर्कोतर्फ, हामी काम शुरू गर्दछौं र पहिलो तलबमै पैसाको अभावमा गर्न नपाएका हरेक इच्छाहरू पूरा गर्न थाल्छौं । यो चक्र जारी रहन्छ । कहिले महँगो ग्याजेटहरू, कहिले महँगो लुगा र जुत्ताहरू, कहिले ड्रीम डेस्टिनेशनमा जाने, यस पछि, खर्चमा
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्यस्तरमा निरन्तर भएको मूल्यवृद्धिको अवस्था मुद्रास्फीति हो । यसको मतलब केही वस्तु वा सेवाको मात्र मूल्यवृद्धि भएमा त्यसलाई मुद्रास्फीति भनिँदैन । यसका लागि समग्र मूल्यस्तरमा वृद्धि भएको हुनुपर्छ । केहीको मूल्य घटे पनि धेरैजसो वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि भएको छ र त्यस्तो वृद्धि लगातार भएको छ भने
अत्यावश्यक व्यबसाय गर्नुस्, जसको लागि लकडाउनमा पनि बैंकबाट कर्जा निकाल्न सकिन्छ !
बैंकिङ खबर । आम नागरीकको दैनिक जिवनमा आइपर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरु जस्तै, औषधि, खाद्यान्न, दुध, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ आदि सम्बन्धि गरीने व्यबसायलाई अत्यावश्यक व्यबसाय भनिन्छ । यी नभई आम सर्वसाधारण्को जीवन कष्टकर हुन्छ । त्यसैले सरकारले तोकेका विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि कर्जा दिइने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको सूचनामा लकडाउनका
लकडाउनलाई अबसर मान्नुस् ! बैंकिङ परिक्षाको तयारी गर्नुस्, (तयारी सामग्री सहित)
इन्टरनेट र मोवाइलबाट गर्न सकिने बैंकिङ सम्बन्धि कामहरु (एक अध्ययन सामग्री)
क्यापीटल कम्पनी (मर्चेन्ट बैंक), सेयर कारोबार र क्यापीटल कम्पनीका कामहरु
बैंकिङ खबर । धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रि वितरण र प्रबन्धसँग सम्बन्धित आवश्यक सम्पुर्ण काम गर्र्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त वित्तीय संस्था मर्चेन्ट बैंक हो । हाल मर्चेट बैंकलाई क्यापीटल कम्पनीको नाममा नामाकरण गरिएको छ । समग्रमा वित्तीय बजार दुईओटा क्षेत्रमा विभाजित हुन्छन् । एक बैंकीङ क्षेत्र (जस्तैः सरकारी बैंकहरु, बाणिज्य बैंकहरु, डेभलपमेन्ट
बैंकिङ खबर । कुल ऋण पूँजीलाई सर्वसाधारण सबैले खरिद गर्न सक्ने गरि विभाजन गरिएको एकाईहरु नैं ऋणपत्र हो । कुनै पनि कम्पनीले ऋणमा लगानी गर्नका लागि आधिकारीक रुपमा तयार पारेको लिखित पत्र जसमा ऋणको रकम, ब्याजदर र भुक्तानी प्रकृया, धितो राखिएको नराखिएको अवस्थाका विषय पा शर्तहरु उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसमा लगानीकर्ताले तोकिएको ब्याज तोकिएको समयमा
घरमै बसेर बैंकिङ कारोबार के के गर्न सकिन्छ ? कसरी गर्ने ?
(लकडाउनमा बैंकिङ शिक्षा) : बैंकिङ लोन, प्रकृया, विधी र आबश्यक डकुमेन्टहरु
बैंकिङ खबर । बैंक खाता एक प्रकारको कारोबार विवरण हो । सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाको रकम जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोलिदिने र उनीहरुको नाममा रकम राख्न र झिक्न पाइने गरी दर्ता गरिदिने विवरण नै बैंक खाता हो । प्राय बैंकहरुमा ३ प्रकारका खाताहरु हुने गर्दछन् । खातामा
बैंकिङ खबर । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निमाणमा केन्द्रित भई सन् १९४४ जुलाई १ दृखि २२ सम्म भएको राष्ट्रसंघीय मौद्रिक तथा वित्त सम्मेलनबाट विश्व बैंक समूहका विभन्न संगठनहरुको स्थापना भएको हो । विश्व बैंक विभिन्न पाँच अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको समूह हो । यस अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन, बहुपक्षीय लगानी
बैंकिङ खबर । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षाका लागि वित्तीय स्रोतहरुलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै वित्तीय साक्षरता हो । यसलाई सामान्यतया आम्दानी, खर्च, बचत, लगानी र कर्जा लगायत विभिन्न पद्धतिका विषयमा जानकारी दिने शिक्षाको प्रकारको रुपमा बुझिन्छ । अहिले पनि विभिन्न पेशाकर्मी र व्यवसायीहरु नगद कारोबार गर्दछन् । आधुनिक अर्थव्यवस्था मुद्रामय भइसकेकाले
बैंकिङ खबर । ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिल २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ अवधिको निष्कासन गर्ने गरिएको छ । यी विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलहरू आवश्यकतानुसार निष्कासन गरिन्छन् । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा